Hell-bent on revenge, his obsessive investigation takes him onanightmare journey intoadark underworld. As the mystery deepens, Max (Mark Wahlberg) is forced to battle enemies beyond the natural world and face an unthinkable betrayal.
theaters in oct 17 - 2008
မနက်ဖန်မှာ ရုံတင်တော့မယ့် ဇာတ်ကားအသစ်တခုကို တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တော့ မကြည့်ရသေး ပါ ဘူး။ မယ်ဂစ်ဆင် အရင်က ရိုက်ဖူးတဲ့ ဇာတ်လမ်းပါ။ ဇာတ်လမ်းကြောရိုးတော့တူပေမယ့် ဇာတ်လမ်းတူမှာမဟုတ် သလို နာမည်ကြီး အက်ရှင် ဂ်ိမ်းတခုပါ။ သူရဲ့ ၀က်ဆိုဒ်ကို လင့်ပေးထားပါတယ် သွားပြီးလေ့လာနိုင်အောင်ပေါ့။ နီး စပ်ရာ သူတွေက ကြည့်ပြီး ကောင်းမကောင်း ပြန်ပြောပေးကြပါဦး။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီလိုကားမျိုးနှစ်သက် တဲ့ အတွက် ကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ မူရင်း ဇာတ်လမ်း အကျဉ်း ကိုလဲ အင်္ဂလိပ်လို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။